पानीमा हुने माईक्रोप्लाष्टिकको स्वास्थ्यमा ठूलो जोखिम छैनः विश्व स्वाथ्य संगठन - Health Aawaj -ahealth news portal in Nepal
गृहपृष्ठ ∕ अन्य ∕ पानीमा हुने माईक्रोप्लाष्टिकको स्वास्थ्यमा ठूलो जोखिम छैनः विश्व स्वाथ्य संगठन
पानीमा हुने माईक्रोप्लाष्टिकको स्वास्थ्यमा ठूलो जोखिम छैनः विश्व स्वाथ्य संगठन
हेल्थ आवाज शुक्रबार, २०७६ भदौ ६ गते, ११:४३ मा प्रकाशित
एजेन्सी–विश्व स्वाथ्य संगठन (डब्लुएचओ) ले पिउने पानीमा हुने माईक्रोप्लाष्टिकले स्वास्थयमा ठूलो जोखिम नहुने जनाएको छ । एक प्रतिवेदन सार्बजनिक गर्दै डब्लुएचओले ठूला र निकै साना कणहरु अबजर्भ गर्ने नभई सिधै शरिरबाट बाहिर जाने बताएको छ । तर, नतिजा सिमित सूचनामा आधारित भएको भन्दै उसले वृहत अनुसन्धानका लागि आव्हान समेत गरेको छ ।
‘माईक्रोप्लाष्टिकले स्वाथ्यमा पार्ने प्रभावबारे अझै बढी जान्न आवश्यक छ,’ डब्लुएचओले भनेको छ । डब्लुएचओका डा. ब्रुस गोर्डनले विभिन्न ब्रान्डका केही महिनाअघि पानीका बोत्तलमा प्लाष्टिकका कण भेटिएको पाइएपछि यसबारे समीक्षा गरिने बताएका थिए ।
के भन्छ प्रतिवेदन ?
५ मिलिमिटर भन्दा कम लम्बाइ भएका माइक्रोप्लाष्टिक, नदी, ताल, पिउने पानीको स्रोत र बोटलको पानीमा पाइन्छ । यसले मानव स्वास्थ्यमा कस्तो जोखिम पार्छ त ? डब्लुएचओले साना माईक्रोप्लाष्टिकलेस्वास्थमा खासै जोखिम नपार्ने तर थप अनुसन्धान आवश्यक पर्ने जनाएको छ । पानीमा प्लाष्टिकका कण हुने विषयमा वास्तवमा पछिल्ला केही वर्षमा मात्र अध्ययन गरिएका थिए । तसर्थ, पानीमा प्लाष्टिकका कणबारे अहिलेसम्म फेला पारिएका प्रमाण सिमित भएको डब्लुएचओले जनाएको छ ।
संसारका दुई अर्ब मानिस संक्रमित पानी पिउछन, जसका कारण हरेक वर्ष १० लाखको मृत्यु हुने गरेको छ
पानीमा हुने प्लाष्टिकका कणबारे भइरहेका अध्ययनमा कुनै मापदण्ड कायम गरिएको छैन । पानीका विभिन्न स्रोतमा पाइने प्लाष्टिकका कणको संख्या अध्ययन गर्न विभिन्न अनुसन्धानकर्ताले विभिन्न फिल्टरहरुको प्रयोग गरेका छन् ।
‘मानौ की प्रति लिटर पानीमा १ सय साना अणु भेटिन्छन भने अर्कोमा केबल एउटा मात्र देखिन सक्छ । प्रयोग गरिएको फिल्टरको साईजमा कणको संख्या निर्भर हुन्छ,’ डा. गोर्डनले भने, ‘हामी आधारभूत रुपमा एउटा त्यस्तो बिन्दुमा छौ, जहाँ अध्ययन विधि निकै फित्तलो छ । ’
डा. गोर्डनका अनुसार प्लाष्टिकका कणबारे गरिएको अध्ययन उपभोक्ताहरुका लागि भने सुखद छ किनकी ठुला प्लाष्टिकका कणहरु र अधिकांश साना टुक्राहरु एब्जर्भ नभई शरिरबाट पास हुन्छ ।
संसारका दुई अर्बले पिउछन् प्रदुषित पानी
पानीमा हुने शौच, रसायन लगायतका प्रदुषित पर्दाथ नियन्त्रण गर्नका लागि हुने निर्मलीकरण प्रक्रियाले पानीको स्रोतको ९० प्रतिशत माईक्रोप्लाष्टिक हटाउने अध्ययनमा जनाइएको छ । अध्ययनले विश्वमा ठूलो सख्ंयामा रहेका व्यक्तिले प्रदुषित पानी पिउने कालो पक्ष उजागर गरेको छ ।
‘संसारका अझै पनि दुई अर्ब मानिस दिशा संक्रमित पानी पिउछन,’ गोर्डनले भने, ‘जसका कारण हरेक वर्ष १० लाखको मृत्यु हुने गरेको छ । यस बिषयमा धेरैको ध्यान जानु आवश्यक छ । ’ डब्लुएचओले प्लाष्टिकबाट निम्तिने प्रदुषणलाई आकस्मिक समस्याको रुपमा हेरेको छ । सम्भव भएसम्म प्लाष्टिक प्रयोगक घटाउन तथा यसलाई पुर्नरावर्तन गर्न समेत डब्लुएचओले आग्रह गरेको छ । प्लाष्टिक प्रदुषणबाट मानव स्वाथ्यमा हुने हानीबारे भने अध्ययन मौन छ ।